मदनको त्यो कुरा, ओलीको यो काम ! - Bulbul Samachar
मदनको त्यो कुरा, ओलीको यो काम !
bulbul सोमवार, चैत २१ गते 48 views
सामान्यतः यो एउटा घटना भयो, ओली बालुवाटारबाट बालकोट जान बाध्य भए, एमाले सत्तापक्षबाट विपक्षमा धकेलियो, कुरै सकियो भन्न नमिल्ने हैन । तर, इतिहासको यो अध्याय त्यतिमै सीमित हुँदैन । यसले एमालेको वैचारिक अडान र व्यवहारिक विचलनबीचको हिसाबकिताब लामो समय मागिरहने छ ।
एमालेले आफूलाई मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दल भन्ने गर्दछ । मदन भण्डारीको उदयअघि संसारभरिका अरु कम्युनिष्टजस्तै एमाले पनि एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीमा विश्वास गर्ने साम्यवादी दल थियो भन्ने जगजाहेरै छ ।
मदन भण्डारीको उदयपछि यो दलले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको कुरा ग¥यो । जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा ग¥यो । जनताको बहुदलीय जनवादका १४ बिशेषतालाई पार्टीभित्र र बाहिर पढाउन थाल्यो । यसको पहिलो बुँदामै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ लेख्यो । केपी शर्मा ओलीमा मदन भण्डारीको आत्मिक उत्तराधिकार सरेका अनौपचारिक दाबी हुन थाले ।
आखिर कुनै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ मा विश्वास गर्ने पार्टी र त्यसको मूल नेताले ‘एक्ट्रा कन्टिच्युसनल राइट’ माग गर्न र प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन ? संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन ? एमालेलाई यो प्रश्न आज मात्र हैन, एक सय वर्षपछि पनि सोधिनेछ । यो एमाले र ओलीका लागि निक्कै ठूलो ‘क्षति’ हो ।
अन्तिम, तर महत्वपूर्ण क्षति
अर्को ठूलो क्षति भविष्यको सम्भावना गुम्ने खतरा हो । अझै पनि एमाले पार्टी उत्रै छ, उत्तिकै छ भनेर दावी गर्नु एउटा कुरा हो । यसलाई व्यवहारमा पुष्टि गर्नु अर्को कुरा हो । नेपालको भोट राजनीति र संसदीय गणितको सामान्य ज्ञान अब प्रायः सबैलाई कण्ठ छ । फुटेकाहरूले जित्ने हैसियत बनाउन नसक्लान्, तर हराउने क्षमता राख्दै आएका छन् ।
कांग्रेस र कम्युनिष्ट सिङ्गासिङ्गै प्रतिस्पर्धामा हुँदा पनि कांग्रेसको सामना गर्न कम्युनिष्टहरूलाई हम्मेहम्मे पथ्र्यो । यतिका धेरै नैतिक संकट, वैचारिक गञ्जागोल र धुजाधुजा पार्टी संगठन लिएर एमालेका ओली समूहले मात्र कसरी यथोचित परिणाम निकाल्न सक्ला ? कार्यकर्तालाई हौसाउन दाबी गर्नु एउटा कुरा, तर धरातीय यथार्थमा दावीलाई बदल्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो ।
हुन त, आलोच्य ओली मात्र छैनन् । समकालीन नेपालमा कुनै त्यस्तो दल र नेता बाँकी छैनन्, जसलाई निर्धक्क बचाउ गर्न सकियोस् । आज देशको जुन हालत र हविगत छ, त्यो केपी ओलीको मात्र हैन, ओली र ओलीजस्तै उनका समकालीन नेताहरूको साझा योगदान र प्रतिफल हो । एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान, विज्ञान, चेतना, शिक्षा, सम्यक संस्कृति र व्यवस्थापन क्षमता नभएको एक तप्का शीर्ष भनिने नेताहरूको भारले देश थिचिएर निस्सासिनुपर्ने अवस्था छ । सबैसँग अघाएर घाँटीसम्मै आइपुगेको अवस्था छ ।
यद्यपि, गत निर्वाचनमा सर्वाधिक जनमत हासिल गर्दै इतिहासको दुर्लभ अवसर खेर फालेको कारण यसको मूल नेतृत्व केपी ओली बढी आलोचनाका भागिदार छन् । उनी नेतृत्वको संघीय सरकार गुम्यो, चार÷चारवटा प्रदेश सरकार गुमे । जबज अनुकूलतामा लाज छोप्ने रुमाल जस्तै दुरुपयोग भयो । वैचारिक अडान र नैतिक भावनाहरू गुमे ।
इतिहासको विरासत र सहकर्मीहरूको साथ गुम्यो । भविष्यका सम्भावनाहरू गुमे । यति धेरै गुम्यो, प्रतिफलमा आखिर के आयो ? यतिधेरै चिज गुमाएर पनि आखिरमा ओलीले के जिते ? एकान्तमा बसेर एक्लै आत्मसमीक्षा गर्दा मनले के भन्छ ? प्रश्नहरू छन् र त उत्तरहरू अपेक्षित छन् । बोलीका जवाफले च्यूरा भिजेनन्, व्यवहारबाट जवाफ दिने अवसर अप्ठ्यारा छन् ।
ओलीले नेपाललाई सार्वजनिक स्थलमै तँ भनेपछि !
राष्ट्रिय जनसाँस्कृतिक महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा म्याग्दीबाट सापकोटा र कार्की